I-china Abicah Rubber Cushion Wokwakha Amakhadi weLaminator nabaphakeli | UCayce Meyi
I-Silicone Rubber Cushion Yokwenza I-Laminator Yekhadi
Umcamelo wenjoloba weSilicone wokwenza amakhadi we-laminator waklanywa futhi wenziwa yinkampani yethu ezinikele ekusekeleni imboni yokwenza amakhadi ngokuya ngesidingo semakethe, efanelekile kuzo zonke izinhlobo zamakhadi asebhange, amakhadi esikweletu nokukhiqizwa kwamakhadi ahlakaniphile.
Umcamelo wenjoloba abicah okhiqizwe inkampani yethu usebenzisa izinhlobo ezimbili zokwakheka kwesakhiwo, okungukuthi i-KXM4213, izinhlangothi ezimbili zenjoloba engelona iphethini, ungqimba oluphakathi lwendwangu ye-fiberglass. I-KXM4233, izinhlangothi ezimbili bezizwile, ungqimba oluphakathi lwe-silicone iraba.
KXM4213 (Zombili izinhlangothi abicah iraba nephethini, umugqa we-fiberglass ophakathi)
Impahla eluhlaza evela eJalimane, izinga lokushisa eliphakeme ukumelana, ukuqina okuhle
Ukushisa kuqhuba ngokushesha, Ukushisa kusatshalaliswa ngokufanayo
Ukufakwa kabusha kwengcindezi ephezulu.
Ukumelana ne-solvent, ukumelana nokuguga, ukumelana nokugqwala.
I-KXM4233 (zombili izinhlangothi zazizwa, iraba eliphakathi labicah)
Impahla eluhlaza ingavikela ukushisa, imelane nengcindezi ephezulu.
Ukufakwa kwamanzi okuhle, kungasusa ngempumelelo i-bubble ne-watermark yekhadi elingaphezulu.
Ukubhafa okuhle, yelula isikhathi sempilo yokushisa ibhodi kanye nebhodi lokulaminetha.
Into I-KXM4213 I-KXM4233
Izinto ezibonakalayo Injoloba yabicah nephethini Ukuzwa ukumelana nokushisa
Izinto eziphakathi Indwangu ye-fiberglass Injoloba emnyama emnyama
Ukuqina kogu A 55 ± 5 50 ± 5
Amandla eqine (N / mm) 80 60
Ukunamathela (N / mm) 4.5 4.5
Ukumelana nokushisa ℃ 230 200
Umbala Mhlophe okumhlophe
Izici zayo zimi kanje:
(Iphethini emaceleni amabili abicah ingilazi yefayibha yendwangu)
• Umkhiqizo usebenzisa izinto zokusetshenziswa zaseJalimane ezingenisiwe, ukumelana nokushisa okuphezulu nokuguquguquka okuhle.
• Ukuqhutshwa kokushisa okusheshayo nokusatshalaliswa kokushisa okufanayo kungakhuphula kakhulu umkhiqizo womkhiqizo ngesikhathi senqubo yokuvikela ngocwazi.
• Inokumelana okuhle kwengcindezi, akukho ukusonteka, okunokwethenjelwa nokuhlala isikhathi eside.
• Isiza ukuqeda imigodi nezinhlamvu ezinhle ebusweni futhi ithuthukise ikhwalithi yomkhiqizo.
• Ukumelana ne-solvent, ukumelana nokuguga, ukumelana nokugqwala, okungenabuthi futhi okungenaphunga, ngokuhambisana nezidingo zokuvikelwa kwemvelo.
• Izinto zokusetshenziswa zomkhiqizo zingamelana nokushisa okuphezulu kanye nengcindezi, zihlangabezane nezidingo zobuchwepheshe zokwenza amakhadi nokuvikela i-lamination, futhi zisetshenziswa kabanzi njengezinto ezisetshenziswayo zokwenza ikhadi.
• Ukuqhutshwa kokushisa okusheshayo nokufanako, kuthuthukisa ukusebenza kahle kokukhiqiza nokonga amandla.
• Inokusebenza okuhle kokumunca amanzi, ingaqeda ngempumelelo amabhamuza namamaki ebusweni bekhadi, futhi ithuthukise kakhulu izinga lokufaneleka lomkhiqizo.
• Inokusebenza okuhle kokuthwebula, igwema amamaki okuqala abangelwa ukuxhumana kanzima phakathi kwepuleti lokushisa ne-laminate, futhi yelula isikhathi sokusebenza kwepuleti lokushisa ne-laminate.
• Easy ukusebenzisa, ukonga esikhundleni man-amahora.
Langaphambilini Abicah Rubber Cushion Wokushisa Okushisayo
Olandelayo: Ishidi Le-Rubber Lama-Silicone Laminator Yelanga